कोरोनाभाइरस, मानव समाजलाई कडा बनाउने वा प्राप्त गर्ने समाज? : मार्टिन Vrijland
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	23 मार्च 2020 मा	• 10 टिप्पणिहरु
कोरोनाभाइरस स्पष्टतः समाज मा एक ठूलो सख्त ल्याउँछ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि सोशल मिडियामा सबै आक्रमणहरूमा सबै फरक मत व्यक्त गर्न हिम्मत गर्ने। कुनै गल्ती नगर्नुहोस्। मैले लेखेको years बर्ष भन्दा बढीको अवधिमा मैले पत्ता लगाए कि सोशल मिडियामा मानिसमा उनको कुञ्जीपाटी गोली हान्ने सैनिक सैनिकहरूको संख्या राइफलसहितको सिपाहीको स than्ख्या भन्दा बढी छ। तिनीहरू केवल तपाइँको मित्रहरूको सूचीमा छन् र उनीहरूसँग काव्य गतिविधिहरू छन् जुन लाग्न धेरै पैसा तिर्दैन, तर धेरै राम्ररी प्राप्त गर्न सकिन्छ र अब तिनीहरूको किबोर्ड पछाडि धेरै समय खर्च गर्दछ। के तिनीहरूसँग राज्यबाट ब्याग छ? लाभको धारणा, कम सजाय?
जब तपाईं मेरो पुस्तक पढ्नुहुन्छ, तपाईंले पत्ता लगाउनु भएको वास्तविकता हामीले महसुस गरेका यी ठूला व्यक्तिहरूसँग दृढताका साथ प्रभावित छन जुन पहिले नै सम्झौता गरिएको छ र राज्यले पहिले नै भुक्तान गरिसकेका छन, किनकि छिट्टै सबैका लागि हुनेछ। टेक्नोक्रेट कम्युनिष्ट राज्यमा जुन अहिले रोल आउट भइरहेको छ। सोभियत संघ अन्तर्गतको पहिलेको GDR मा बर्लिनको पर्खाल पतन हुनु अघि 1० जनामा ​​१ जना Inoffizielle Mitarbeiter (IMB) थिए। के तपाईंले वास्तवमै सोच्नुभयो कि यदि यो प्रणाली यत्तिको सफल भयो भने यस प्रणाली धुलोको कपाटमा हराउने छ? तपाईंको वरिपरि राम्रो नियाल्नुहोस्।
सबैले कोरोनाभाइरस स crisis्कटको साइड इफेक्ट याद गरेका छन। के यस राज्यसँग एकै पटकमा अरबौं अरबौं तलबहरू लिन, उपलब्ध कम्पनीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन र कर फिर्ताको लागि उपलब्ध छ? यो कसरी सम्भव छ? वर्षौंसम्म, तपस्याको माध्यमबाट धकेलिएको छ र अब ट्याप अचानक पूर्ण रूपमा खोल्न सकिन्छ! हामी गोप्य रूपमा आधारभूत आय (जस्तै साम्यवाद अन्तर्गत) को परिचय गवाही। त्यो आधारभूत आय जुन Inoffizieller Mitarbeiter गोप्य रूपमा लामो समय को लागी आनन्दित हुन सक्छ।
त्यो अप्रत्याशित रूपमा उदार राज्य सहायता सायद 750 XNUMX० अर्ब डलरको भाँडोबाट आउँदछ ECB पुनः प्रिन्ट गरियोt छ। यद्यपि अर्को जार पनि छ।
२०१ quarter को क्वार्टर After पछि, पेन्सन पूँजीमा १4० बिलियन यूरो सबै पेंशन कोषमा उपस्थित थियो। सबैभन्दा ठूलो पेन्सन कोषमा एबीपी (अल्जमीन बुर्गरलिजक पेन्सियोएन्फोन्ड्स), पीएफजेडब्ल्यू (पेनसिएन्फोन्ड्स जोर्ग एन वेल्जिन), पीएमटी (पेनसिएन्फोन्ड्स मेटाल एन टेक्निक), पीबीएफ बोउ (स्टिचिंग बेड्रिजफस्टकपेंसियोएनफोन्ड भूर डे बुवेंजीवरेनिड)। सँगै तिनीहरू लगभग थियो 909 बिलियन लगानी पूंजी। निवृत्तिभरण कोष र अन्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले एम्स्टर्डम स्टक एक्सचेन्जमा सबै भन्दा बढी व्यापार खण्ड प्रदान गर्दछ।
ती पेंशन कोषहरू यस कोरोना स during्कटको बेला स्टक बजारमा ठूलो गिरावट आएको थियो। म विस्तारमा वर्णन गर्दछु कि यो प्रहार जे भए पनि आउँदैछ यो लेख.
मिडिया अब रिपोर्ट गर्दछ कि घर मा पर्याप्त पूंजी छैन सबै पेंशन सुविधाहरू पूरा गर्न को लागी तिनीहरूले आफ्नो सहभागीहरु लाई वर्तमान र भविष्यमा प्रतिज्ञा गरेका छन्। औसत कोष अनुपात २ days दिनमा (सूर्य) १०१ प्रतिशतबाट 29 percent प्रतिशतमा झरेको छ। ट्राउ रिपोर्ट गरियो पहिले नै मार्च २ मा)। यसको मतलव प्रत्येक परिभाषित पेन्सन यूरोको लागि cash c सेन्ट नगद छ। ECB अब वर्षौं देखि QE समर्थन प्याकेज (क्वान्टिव ईजि eas) दिदै आएको छ। धेरै कम्पनीहरूले आफ्नो स्टक मूल्य कृत्रिम रूपमा उच्च राख्न सक्षम छन्, किनभने तिनीहरू वास्तवमा लगभग शून्य ब्याजमा पैसा toण लिन सक्षम थिए र केन्द्रीय बैंकले त्यो backण फिर्ता किनेको थियो। जब सम्म तपाईं यसको सेयर खरीद गर्नुहुन्छ, त्यो पैसा बजारमा प्रवेश गर्ने छैन, तर संस्थागत लगानीकर्ताहरूको तहमा रहनेछ।
अब जब डच राज्यले दशौं अरबौं समाजमा पम्प गर्दैछ (जुन सम्भवतः ईसीबीबाट आएको हो), यो पैसा समाजमा समाप्त हुन्छ। जे भए पनि, यो मानिसहरूलाई समर्थनको रूपमा दिइन्छ जसले तत्काल खाना र पेय पदार्थ किन्नेछ। यदि तपाइँले दशौं अरबौं QE को रूपमा मुद्रण गर्नुभयो र यसले संस्थागत लगानीकर्ताहरूको तहमा प्रसारण गरिरह्यो भने यसले वास्तविक जीवनमा पैसाको मूल्यमा थोरै प्रभाव पार्छ। जहाँसम्म, यदि तपाईले करोडौं निचोरेर जनतालाई दिए भने यसले हाइपरइन्फ्लेसन निम्त्याउन सक्छ। यसको मतलब यो कि प्रतिज्ञा गरिएको समर्थन अझै यो क्षणमा धेरैलाई राहत दिन सक्छ र केहिले घरैमा बसिरहेको छुट्टीको मजा लिन सक्छ, तर त्यो १ हप्ता पछि रमाईलो छैन। जब मुद्रास्फीति हिट हुन्छ, अचानक किराना सामानको अर्को झोला भर्न र मुखलाई खुवाउन गाह्रो हुन्छ।
मलाई पेंशन कोषको राष्ट्रियकरण देखेर छक्क लाग्दैन। पेंशन कोषहरू पनि फेरि सरकारी बन्धन (secण धितो) मा छन् भन्ने तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै र यदि सरकारले ECB बाट पैसा प्राप्त गर्‍यो भने तिनीहरू फेरि कम मूल्यवान हुन्छन्।
मलाई लाग्छ कि हामी पूर्ण परिवर्तनको छेउमा छौं, जुन मलाई लाग्छ प्रजातन्त्रबाट टेक्नोक्रेट कम्युनिष्ट प्रशासन (डिजिटल नियन्त्रण प्रणाली) मा सर्दै। प्राथमिकता केन्द्रित। हामीले पहिले थाहा पाएका सबै परिवर्तन हुनेछन् (पेन्सन सहित)। कम्पनीहरूलाई राष्ट्रियकरण गरिनेछ, सीधा होइन, तर चरणबद्ध रूपमा र सबैले आधारभूत आय प्राप्त गर्नेछन्। त्यो आधारभूत आय मात्र ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ यदि त्यहाँ विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीको एक पूर्ण रीसेट छ र यो सम्भवतः यसको लागि पनि निर्देशित छ। अमेरिकामा हामीले डोनल्ड ट्रम्पले हिजो त्यस्तै उपायहरूको घोषणा गरेको देख्यौं जुन नेदरल्याण्ड्समा लिइएको थियो। यो भित्तामा चिन्ह हो।
यदि तपाईं हाइपरइन्फ्लेसनको कारणले तुरुन्त बेकारको आधारभूत आम्दानीको ग्यारेन्टी दिन चाहानुहुन्छ भने तपाईंले वास्तवमा छापिएको पैसाको debtणको विशाल पहाडलाई समाप्त गर्नुपर्दछ। र दिइएको छ कि निवृत्तिभरण कोषहरू डच राज्यको debtण धितोको ठूलो धारक हुन्, ती कोषहरूमा रहेको झूटा पूंजी समाप्त हुन्छ।
मलाई थाहा छैन कि सबै debtsणहरूको त्यस्तो कठोर रद्द हुनेछ कि छैन, किनभने त्यसोभए तपाईंले साँच्चिकै सम्पूर्ण बैंकिंग र मौद्रिक प्रणालीलाई विश्वव्यापी रूपमा समाधान गर्नुपर्नेछ। अन्तत: तथापि, म विश्वास गर्दछु कि काम नयाँ विश्व वित्तीय प्रणालीतर्फ गइरहेको छ।
पूर्ण अराजकताबाट बाहिर नयाँ अर्डर सिर्जना गर्न यो सजिलो छ। र त्यो अराजकता ठूलो हुन गइरहेको छ। हामी सम्भवतः सबैभन्दा पहिले डच राज्य द्वारा निवृत्तिभरण कोष जफत देख्ने छौं। वास्तवमा, पेन्सन कोष राष्ट्रियकरण एक स्याउ र एक अण्डा को लागी धेरै मुद्रित पैसा किन्न भन्दा अरु केहि छैन, तर तपाईंको कोषमा संख्या स्पष्ट रूपमा केहि सय अरब भन्दा माथि छ र तपाईं अधिक दूर दिन सक्नुहुन्छ।
लामो कहानी छोटो बनाउन का लागी: मेरो विश्वास छ कि हाइपरइन्फ्लेसनले नै डच जनस their्ख्यालाई उनीहरूको तालाबन्दीमा बन्दी बनाउनेछ। भोक लाग्यो!
हामी अझै पनि मिडिया र राजनीतिज्ञहरूद्वारा खेलेका छन जसले सम्झौता गरेका व्यक्तिहरू (Inoffizieller Mitarbeiter, IMB'ers) सँग आफ्ना भिडियोहरू खिच्दछन् जो सम्भवतः मैले दुई हप्ताको लागि पूर्वानुमान गरेको एलीबी उत्पन्न गर्न १. meter मिटरको दूरीमा राख्दैनन्: कोरोनाभाइरस हातबाट हट्दै छ "किनकि हामी धेरै लचिलो छौं" त्यसैले अब हामी फ्रान्स र स्पेनको भन्दा कडा तालाबन्दीमा जानु पर्छ।.
त्यो कडा लक ताकी अपरिहार्य रूपमा जनता मा बेचिन्छ। यस बीचमा, हामी यो पनि सुन्न सक्दछौं कोरोनाभाइरस परिवर्तित र ती सबै धेरै खतरनाक हुन्छन्। त्यसोभए हामी आफैलाई यस्तो अवस्थामा भेट्न चाहन्छौं जहाँ प्रत्येक व्यक्ति आफ्ना साथीभाइसँग डराउँछन् र यदि तपाईंले कसैलाई भेट्नुभयो भने यसले तपाईंलाई मार्न सक्छ। तसर्थ, स्वतन्त्र रूपमा घुम्ने जोसुकै पनि "दोषीको मार्फत मृत्यु" सामूहिक हत्यारा बन्न जान्छ।
केही रिटेल चेनहरूको वितरण केन्द्रहरूमा खराबी छ जहाँ अवस्था कल्पना गर्नुहोस्। कल्पना गर्नुहोस् कि एटीएमलाई अब पैसा दिईंदैन (त्यो डरलाग्दो ट्रान्समिसेबल भाइरसबाट संक्रमणको खतराको कारणले) र हाइपरइन्फ्लेशन कल्पना गर्नुहोस्, जहाँ रुट्टले प्रतिज्ञा गरेको आधारभूत आम्दानीले हप्तामा १ रोटी र आलुको थैली कमाउँछ। त्यसो भए के हुन्छ? तब मानिसहरू भोकाउँछन् र त्यसपछि उनीहरू घरबाट बाहिर आउँदछन्। त्यसो भए तिनीहरूका छिमेकीहरूले उनीहरूलाइ रिपोर्ट गर्नेछन्, किनकि तिनीहरू हिंड्ने सम्भावित टिक्ने कोरोना टाइम बमहरू आफैं र जोसुकैले चिन्ने सबैका लागि खतरा हुन्। र त्यसपछि सेनाले हस्तक्षेप गर्नुपर्नेछ र हामी देख्नेछौं कि धेरै मानिसहरू हराउँछन्। त्यो कुनै डराउने कुरा होइन, त्यो तार्किक सोच हो।
र त्यसपछि हामी युरोपमा अव्यवस्थाको गवाही दिन्छौं जुन मैले सधैं पूर्वानुमान गरेको छु। र जहाँ अराजकताले शासन गर्दछ, त्यहाँ सामान्यतया नयाँ शक्ति आक्रमक हुन्छन् चीजहरूलाई क्रमबद्ध गर्न। तिमीलाई थाहा छ म यस देशमा छु वर्षौं को लागी। यो सबै मास्टर स्क्रिप्ट हो र म त्यो पुस्तकको मास्टर स्क्रिप्ट वर्णन गर्दछु। यदि तपाइँले त्यो पुस्तक र त्यस पुस्तकको थपहरू यहाँ साइटमा पढ्नु भएको छ भने, तपाइँलाई थाहा छ कि त्यहाँ आशा छ। तर त्यसले गहिराइको एक बिट लिन्छ। के भइरहेको छ हेर्दै यथार्थवादी र सकारात्मक छ। त्यसोभए तपाईं तयार हुनुहुन्छ र तपाईंलाई थाहा हुन्छ कुन स्तरमा तपाईं केहि गर्न सक्नुहुन्छ।
स्रोत लिङ्क सूची: nos.nl, trouw.nl, trtworld.com
आउँदो कोरोनाभाइरस लकडाउनमा के गर्ने र के गर्ने सिक्नुहोस्
ट्याग: दूरी, एक र आधा, आधारभूत आय, कोरोनाभाइरस, विशेष, मुद्रास्फीति, लकडाउन, मीटर, रूट, समर्थन
23 मार्च 2020 मा 10: 10
सामाजिक मिडियाको अतिरिक्त, जहाँ सबैले (कथित) चेतावनी दिन्छ कि कसैले पनि उनीहरुको जिम्मेवारी लिदैन र "सामाजिक दूरी" आदेशको पालन गर्दैन (तथाकथित विशेषज्ञहरु) का समाचार पत्र पनि आज फेरि चेतावनीहरूले भरिएको छ।
आतंककारी, ट्राफिक टाउकोमा टेलिग्राफ विशेषज्ञ आज हेडहरू: ब्ल्यान्ड फर द डन्जर ”। महापौर र प्रभावकारीहरूले चेतावनी दिन्छन् र त्रास छर्दछन् कि नेदरल्याण्ड्स ठूलो भाई, इत्यादिको आदेशलाई व्यापक रूपमा बेवास्ता गर्दै छ, आदि।
व्यक्ति कुल लकडाउनको लागि तयार भइरहेका छन् र यो सबै हाम्रो गल्ती हो।
कुन अनौंठो हो (मलाई लाग्छ यो अनौंठो छ) कि म र मेरो साथीहरूको सर्कल (मसँग मित्रहरूको ठूलो घेरा छ) कसैलाई चिन्दैन जो कोरोना छ वा भएको छ, सबै समाचार पत्र, निउउजुर, यूट्यूबबाट हो।
यो पनि अनौठो छ कि विश्वव्यापी रूपमा धेरै प्रख्यात व्यक्तिको कोरोना छ, (अवश्य पनि उनीहरू प्रभावकारी छैनन् मलाई लाग्छ कि कसरी हिम्मत छ) यो देखिन्छ कि भाइरसको मुख्यतया चर्चित व्यक्तित्व (राजनीतिज्ञ, कलाकार, गायक, चलचित्र स्टार) मा एक आँखा छ र प्रख्यात उल्लेख छैन खेलाडीहरु)।
मलाई यो कोरोना भाइरससँग मिल्दछ जस्तो लाग्छ मलाई यो भेदभाव गर्दछ, किन केवल प्रख्यात व्यक्तिहरू?
23 मार्च 2020 मा 10: 40
तपाईंसँग NSB सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो .. के हामीसँग अहिले IMB का सदस्यहरू छन्?
23 मार्च 2020 मा 11: 24
यदि तपाईंले राम्ररी हेर्नुभयो भने, तिनीहरू वास्तवमै एनएसबी सदस्यहरू हुन्। नेदरल्याण्ड्समा यस किसिमका यति धेरै मानिसहरू छन् र यहाँका सरकारलाई यी मानिसहरूलाई परिचालन र उत्साहित तुल्याउन किन यत्तिको सजिलो छ भनेर यसले व्याख्या गर्न सक्दछ, र त्यो पैसासँग पनि छैन।
दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनहरूले कहिलेकाँही गुनासो गरे कि डचले सँगी देशवासीलाई सहयोग पुर्‍याउन र धोका दिन अत्यन्तै कट्टर थिए। कसै-कसैले गुनासो गरे कि यसका कारण उनीहरूसँग धेरै काम थियो र ती विश्वासघातीहरूलाई उठाउनको लागि तिनीहरू अति व्यस्त थिए।
नेदरल्याण्ड्स (जो सबै होईन) एक धेरै ईर्ष्यालु छ, उदाहरणका लागि, जर्मन, बेल्जियन र फ्रान्सेली पनि, तिनीहरूले लगभग अर्को डच व्यक्तिलाई आँखामा बत्ती दिन्छन्, त्यसोभए आफ्नो देशवासीलाई धोका दिनुभन्दा राम्रो के हुन सक्छ र? कमाउनको लागि पनि राम्रो पुरस्कार, मलाई लाग्छ आईएमबी बन्न चाहने व्यक्तिको प्रतिक्षा सूची हुन सक्छ।
23 मार्च 2020 मा 10: 18
एक सडकमा मैले दुलहा हातमा समातेको र एक अर्कालाई म्वाँई खाँदै गरेको देखेँ (यसमा कुनै गलत छैन) जस्तो कि परेवाले, केटा र केटीलाई।
एक महिलाले दम्पतीलाई पार गर्यो र मैले उनलाई भनेको सुनें, के तपाईंले त्यसलाई रोक्नुहुनेछ र दम्पतीको केटा चकित भए र के हुँदैछ भनेर सोधे। उनी चिच्याउँदै भनिन्: "तपाईंलाई थाहा छ तपाईं पागल हुनुहुन्नथ्यो।" केटा: "आमा शान्त हुनुहुन्छ, चिन्ता लिनुपर्ने केहि छैन"। ती महिला उन्मादग्रस्त भए र श्राप दिन लागे, यो हातबाट हट्न सक्थ्यो, दम्पती चुपचाप आफ्नो बाटोमा लागिरहे, महिला रोकिन्।
एक अर्कामा थोरै ध्यान दिनुहोस्
23 मार्च 2020 मा 11: 16
कार्यमा मिस्टर स्मिथ प्रभाव, वा कसलाई थाहा छ, त्यो मिठाई महिला आधुनिक NSB सदस्य हुन् (वर्किंग शीर्षक inofficieller mitarbeiter अन्तर्गत पनि चिनिन्छ)।
23 मार्च 2020 मा 11: 07
बैंकहरू आज मेरो शहरमा बन्द छन् (परिक्षण रन? मानिसहरूले कसरी प्रतिक्रिया देखाउँछन्)?
म आगामी हप्ता / महिनामा त्यस्तो उपायहरू अपेक्षा गर्दछु जसले जनसंख्या स्वीकार गर्न तयार हुनु अघि सामान्यतया हेगेलियन द्वन्द्वात्मकताको ठूलो आवश्यक पर्ने हुन्छ।
केहि उपायहरू मैले देखेको छु (तिनीहरू जान्दछन् कि थाहा छैन तर मलाई लाग्छ उनीहरू त्यसो गर्न सक्दछन्) र तिनीहरूको नतीजाः
१) पिन सीमा प्रति कार्ड प्रति दिन / हप्ताको लागि पिन सीमा, उदाहरणका लागि 1० यूरो। (डर अराजकता सिर्जना र मानिसहरूलाई कैशलेस गर्न को आदी हुन
२) वा एटीएमहरू जुन दिन / हप्ताको केहि क्षणहरू मात्र खुला हुन्छन् (अराजकता सिर्जना गर्ने र क्याशलेसको बानी हुने)
)) परिचय (अस्थायी रूपमा, तर आजकल यो स्थायी लागि न्यूजप्याक हो) आधारभूत आयको परिचय
)) अस्थायी कर बृद्धिका लागि आधारभूत आम्दानीको परिचय दिईन्छ, उदाहरणका लागि, एसएमई / फ्रीलांसरहरू जसले अझै सफल छन् र राम्रो पैसा कमाउँछन् वा जो एलिटका अनुसार संकटबाट नाफा कमाउँछन्।
)) उद्यमीहरूको शर्मि। जुन सम्भावित रूपमा स advantage्कटको फाइदा लिन्छन् र पैसा कमाउँछन् किनकि उनीहरू यस कोरोना हाइपमा राम्रो आय मोडलका साथ आउन पर्याप्त स्मार्ट थिए। (मैले सोशल मिडिया र वामपन्थी राय साइटहरूमा यो धेरै भइरहेको देखेको छु)
Pension) पेन्सन कोष र उद्योगको राष्ट्रियकरण। (एसएमईहरू पछि प्रतिबन्धहरू र करहरूमा ठूलो बृद्धि भईरहेछन् (तथाकथित अस्थायी एकता कर)) कि तिनीहरू सबै दिवालिया हुन्छन्, ती कम्पनीहरूले ती संकटहरूको बावजूद अझै पनि राम्रो पैसा कमाउँछन्।
)) बहुराष्ट्रियहरू धेरै ठूला र अधिक शक्तिशाली हुँदै गइरहेका छन्, शेयर बजार पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुँदैछ। शेयर एक्सचेन्ज कम्पनीहरू राष्ट्रियकरण गरीन्छ (अनुमान गरिएको अस्थायी रूपमा) सरकारहरू र एलीटबाट पर्दाबाट फिर्ता किन्थे (यदि तिनीहरू पहिले नै उनीहरूको हातमा थिएनन्)।
)) द्रुत परिचय subse जी विश्वव्यापी रूपमा सुरक्षाको लागि र त्यसपछि भाइरसको प्रकोप रोक्नको लागि।
23 मार्च 2020 मा 12: 15
जब निवृत्तिभरण कोषहरू राष्ट्रियकरण हुन्छन्, राज्य अवरोधहरू छापिन्छन्। यो सरकारी reduceण घटाउने तरीका हो। हामीले यसलाई हंगेरी जस्ता देशमा पहिले नै देख्यौं, जहाँ निजी निवृत्तिभरण कोषहरूको राष्ट्रियकरण र सरकारी debtण (जीडीपीको सापेक्ष) तुरुन्तै अस्वीकार गरियो। उदाहरणका लागि, सरकारले उनीहरूको debtणको एक ठूलो अंश छुटकारा दिनेछ, जुन सम्भवतः बैंकहरूको लागि मुद्रास्फीतिबाट हराउन दिनु भन्दा उत्तम हो। उत्तरार्द्ध किनभने बैंकहरू एक धितो debtण भएकाहरूले यस तरीकाले उनीहरूको debtsणबाट छुटकारा पाउनको लागि चाहँदैनन्। बैंकहरूको पक्षमा मासिक धितो चुक्ताको कारण सम्पत्तीको म्याद सकिनेछ।
23 मार्च 2020 मा 13: 33
यदि व्यक्ति अब आफ्नो धितो तिर्न सक्दैन, बैंक कब्जा हुनेछ।
यदि बैंक राष्ट्रियकरण गरीएको छ (ABN AMRO हेर्नुहोस्), तब राज्यले तुरुन्तै ती सबै घरहरूको स्वामित्व पाउनेछ ... निर्माणमा टेक्नोक्रेट साम्यवाद
23 मार्च 2020 मा 13: 07
EAR साक्षी रिपोर्ट:
गत शुक्रबार मैले एक भागेको अफगानसँग कुरा गरें जसले डच अर्थव्यवस्थालाई एक उद्यमीको रूपमा समृद्ध तुल्यायो। उनले चीनमा एक राम्रो मित्र को बारे मा भने। त्यो मित्र परिवार (पत्नी र children बच्चाहरु) संग २. months महिनाको लागि अलग गरिएको छ। तिनीहरूले राज्यबाट एक प्रकारको भाउचर प्राप्त गरे। घरको १ व्यक्तिलाई दैनिक किनमेल गर्नका लागि अनुमति छ। रिपोर्टिंग पूर्व निर्धारित जाँच पोइन्टको एक किसिममा गरिनु पर्छ। टेलिफोन र भौचरको साथ विधि। सुपरमार्केटहरू खोल्दा घुमाउँदछ, तर सामान्यतया १ मात्र खुला हुन्छ। मैले उनको कामको बारेमा के भनेँ (सिलाई कारखानामा)। भाग्यवस त्यो पनि "समाधान" भयो। भाँडा र बिजुलीको भुक्तानी गर्नुपर्दैनथ्यो, राज्यले खाना किन्न मजदुरहरूलाई भुक्तान गरिन्थ्यो।
पछि जब म घरमा थिएँ, र जानकारीबाट पुन: प्राप्त भयो, धेरै प्रश्नहरू मैले सोध्न चाहेका थिए। जहाँसम्म, म अर्को हप्ता उनीसँग व्यक्तिगत रूपमा पुन: जडान गर्न सक्षम हुनेछु भन्ने मौका दिन प्रति दिन कम हुँदै गइरहेको छ।
१ = कुनै पनि होइन
one = कुनै पनि होइन
यदि तपाईंले सहि प्रश्नहरू सोध्नुभयो भने, विशेष गरी प्रश्नहरू जुन दैनिक घटनाक्रम / धारणाको व्यावहारिक वर्णनको लागि कल गर्दछन् भने ठूलो चित्र स्वचालित रूपमा देखा पर्नेछ। र के त्यहाँ ईमानदारी वा साँचो जालसाजी छ कि विवेकीकरणबाट निष्कर्ष निकाल्नको लागि पर्याप्त सजिलो छ
Attn zzpers जो अब फिन मद्दत को लागी en masse en ensert। सहभागिता ऐन अझै कार्यान्वयनमा छ। एक क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुहोस् = योगदान गर्नुहोस्। यदि तपाइँको रोजाई को कुनै काम छैन, तब रोजगार छ। त्यो पनि राजस्व मोडल हो ... पहिलेदेखि, सामन्त प्रणाली वा पुरानो झोलाहरूमा नयाँ मद्य?
कानुनी मद्दत पाउनुहुन्छ? त्यो पनि विगतको कुरा हो। उप सूचना विभाग (नागरिक) अदालतहरू अर्को सूचना नभएसम्म बन्द छन्।
हामी सबै एक हौं, मेरो बहावलाई समात्छौं, नौंच निशान विन्क विन्क छैन अब
जे होस्, वसन्तको शिखर त्यहाँ छ। किनभने हामी पनि नाक द्वारा लिइएको थियो। प्रकृति अझै weeks हप्ता अगाडि छ, पात्रो weeks हप्ता पछाडि छ। Itjing / jaap voigt कार्य हेर्नुहोस् र मौसम अनुसार बाँच
प्रकृति अनुसरण गर्नुहोस् र तपाईं वास्तविक प्रकृति हुनुहुन्छ! अन-वार्डहरू (वार्डमा) र आउट-वार्डहरू (वार्डमा) यसको बावजुद…।
माइन्डसेट रिसेट!… .यदि तपाइँ अझै "मद्दत" प्रदान गर्न चाहानुहुन्छ भने ...
24 मार्च 2020 मा 05: 36
मार्टिन:…। “त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ ?? `
बाहेक धेरै निवृत्तिभरणकर्ताहरू मर्दैछन्, र उनीहरूको राज्यमा रहेको पेन्सन पैसा वास्तवमा जफत गरिएको छ
र यसरी निवृत्तिभरणको भाँडा पूर्ण हुँदै जान्छ (जसको साथ तिनीहरूले धेरै चीजहरू तिर्न सक्छन्…।)… .इस
त्यहाँ अर्को कुरा पनि छ: मैले अवश्य १० (!) पहिले पढेको थिएँ कि ती सुपर धनी परिवारहरू (जसलाई इल्युमिनाटी, रोथस्चिल्ड्स, रकफेलरहरू इत्यादि भनिन्छ) २ ० ० ट्रिलियन अलग राखी सकेको छ २ ० ०! पछि! किनकि उनीहरूसँग 102० ट्रिलियन भन्दा बढीको संयुक्त स्वामित्व छ (तब अनुमान गरिएको छ, सायद अब बढि) तपाईंले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि उनीहरूले ती २०० खरब कुललाई वेवास्ता गरेनन। पिग्गी बैंकको रूपमा त्यो २०० ट्रिलियनले सारा विश्व लिनुपर्ने थियो जुन अहिले भइरहेको छ। उही लेखमा, जसको दुर्भाग्यवस मसँग अब कुनै लिंक छैन, यो पनि भनिएको थियो कि यी परिवार बाहिरका मानिसहरुको जम्मा सम्पत्ति, यसैले पृथ्वी केवल tr० ट्रिलियन अनुमान गरिएको थियो। यसैको कारणले पृथ्वीको जनसंख्या billion अर्ब मानिस भएकोले यस रोशनीमा २० गुणा पैसा छ।
२ ० ० खरब, यदि तपाईं 2० ट्रिलियन पाउनुहुन्छ भने यो पिट्यान्स हो। २ ० ० ट्रिलियन २०० हो १0शून्यको साथ, त्यसैले यो वास्तवमा छ: २ ० ० बिलियन x एक अरब। उही लेखमा यो पनि भनिएको थियो कि त्यस भाँडोबाट यस अधिग्रहणको समयमा सबैले लगभग असीमित सबै देशहरूको सरकारलाई भुक्तानी गर्नेछ, यो अधिग्रहणको लागि कति तिर्नुपर्दछ !!! त्यस लेखमा जोड दिइएको थियो
take टेकओवरमा - र यसको लागत कस्तो हुँदैन। अन्तिम लक्ष्य दृढतापूर्वक यो अधिग्रहण थियो
र पैसा महत्त्वपूर्ण थिएन।
लेख अझै फेला पार्न सकिन्छ, तर लिंक नभएकोमा क्षमा प्रार्थी, धेरै पहिले। निश्चय पनि त्यहाँ टिप्पणी गर्नेहरू छन् जसले यो लेख सम्झना गर्छन्?
« जब कुल कोरोनाभाइस लकडाउन आउँछ र कस्तो देखिन्छ: परीक्षण पोष्टहरू र सेना
बिल गेट्स 'क्वान्टम डट्स' वायरलेस आईडी कार्ड जसले तपाईंको कोरोनाभाईस छ वा छैन र पनी तपाईंको खोप लगाइएको छ भनेर ट्र्याक राख्दछ। »
कुल भ्रमण: 1.455.754
कोरोना संकट: प्रारम्भिक ट्र्याकि and र अनुप्रयोगहरू नभएसम्म लकडाउनबाट बाहिरिन २ देखि years वर्ष सम्म लाग्न सक्दछ
ठुलो सोच: कोरोना स after्कट पछि हामी कस्तो विश्व निर्माण गर्ने छौं?
कोरोनाभाइरस कोविड - १ and र विज्ञान: यसले कसरी तपाइँको शरीरमा प्रवेश गर्दछ र तपाइँ यसलाई कसरी स्थानान्तरण गर्नुहुन्छ?
कोरोनाभाइरस: भाइरस कहाँबाट आउँछन् र कसरी तिनीहरू गुणा र सर्छन्?
मार्टिन भिजल्याण्ड op कोरोना संकट: प्रारम्भिक ट्र्याकि and र अनुप्रयोगहरू नभएसम्म लकडाउनबाट बाहिरिन २ देखि years वर्ष सम्म लाग्न सक्दछ
guppy op कोरोना संकट: प्रारम्भिक ट्र्याकि and र अनुप्रयोगहरू नभएसम्म लकडाउनबाट बाहिरिन २ देखि years वर्ष सम्म लाग्न सक्दछ
अब व्यापक भाइरस पुस्तक अर्डर गर्नुहोस्: